Adobe Fresco ayaa loogu dhawaaqay barnaamij cusub oo "smart" ah oo sawir leh | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Fresco waa codsi sawir iyo sawir cusub laga bilaabo Adobe ee loogu talagalay qalabka mobilada iyo in ay la timaado hadafka ah in uu noqdo "aaladda" lafteeda.
Haddii aan ka hadalno Adobe Fresco waxaan ka hadlaynaa waxa ilaa maanta Mashruuca Gemini. Mashruuc aad muhiim ugu ah Adobe waxkasta oo ku saabsan aaladaha mobilada iyo isdhexgalka dabiiciga ah maadaama ay wada taabtaan.
Adobe Fresco waa barnaamij sawir iyo sawir qaadis ah oo loogu talagalay iyada oo ujeedadu tahay in xirfad dhamaysto Iyo in aysan ahayn barnaamij gaar u ah kuwa ugu hibada badan, ama kuwa u isticmaali kara wax kasta.
Fresco ayaa la heli doonaa dhamaadka sanadkaan Adobe horayba waa loo haystaa aqbalida codsiyada beta kaasoo ku jira waji gaar ah. Taasi waa, ama waa lagu casuumay, ama waa inaad sugto. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad tijaabiso ugu yaraan ka dib markaad dhex marto su'aalo kooban oo lagu weydiin doono aaladaha aad isticmaasho, nidaamka qalliinka aad ku isticmaasho kombiyuutarkaaga ama haddii aad horay u isticmaashay barnaamij loogu talagalay qalabka moobiilka.
Waad ka qaybqaadan kartaa beta-ga gaarka loo leeyahay laga soo xigtay. Fresco waa barnaamij xoojinaya hal abuurka. Gudaha wajiga koowaad wuxuu imaan doonaa oo kaliya Apple iPad, ee noocyada dambe qalabka kale ee moobiilku waxay noqon karaan kuwa ku raaxeysan kara khibradooda sawir.
Qaar ka mid ah astaamaheeda ugu xiisaha badan waxaan helnaa «burushyada nool» oo adeegsada caqliga macmalka ah waxaa qoray Adobe Sensei si dib loogu soo celiyo dabeecadaha saliidaha iyo midabbada biyaha ku dhex leh shiraac. Taasi waa, kaliya ma sawiri doonno taxane ah pixels, laakiin "pixels"-kan ayaa ku milmi doona midabadaas ku hareeraysan si ay isugu dayaan inay dib u soo ceshadaan sixirkii dhaca markii aan ku maydhinay warqad gaar ah oo farsamadan ah.
Khibrad dhan oo ina sugaysa iyo waxaan rajeyneynaa dhowaan inaan isku dayno inaan kuu soo dirno. Waxaan horeyba kuugu heynaa barnaamij sawir iyo rinjiyeyn hor leh: Adobe Fresco. Intaad isku dayi karto tan Tifatiraha fiidiyowga Adobe ee mobilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe wuxuu ku dhawaaqay magaca waxa uu ugu yeeray mashruuca Gemini: Adobe Fresco